Fakana an-keriny an’i Navaze Veldjee: lavon’ny zandary Ragodogodona, jiolahy enina hafa tratra | NewsMada
Fakana an-keriny an’i Navaze Veldjee: lavon’ny zandary Ragodogodona, jiolahy enina hafa tratra
Par Taratra sur 13/01/2020
Maty voatifitry ny zandary avy ao amin’ny sampana fikarohana heloka bevava (Secres) raha nentina hanoro ireo namany mpiray tsikombakomba aminy tany Manjakandriana, ny zoma teo ny jiolahy raindahiny amin’ny fakana an-keriny antsoina hoe Ragodogodona…
Nambaran’ny lehiben’ny sampana fikarohana heloka bevava, ny Kly Ravelomanana Tahina, fa nalain’ny jiolahy an-keriny teny Soavimbahoaka i Navaze Veldjee, ny tapaky ny volana desambra 2019 lasa teo. Nikaroka ireo olon-dratsy ny zandary ka sarona teny Ankadimbahoaka sy Ambohimangakely, ny 7 janoary teo. Voatonontonona tao anatin’ity fakana an-keriny ity ny anaran-dRagodogodona. “Anisan’ireo tafaporitsaka tamin’ilay fikasana haka an-keriny teratany karana iray teny Anosivavaka Ambohimanarina izy. Nahafatesana jiolahy efatra ary nahatrarana fitaovam-piadiana mahery vaika tanaty sakaosy tamin’izany”, hoy ny lehiben’ny Secres. Tratra eo am-piketrehana fakana an-keriny hafa indray ireto jiolahy ireto niaraka tamin’ny puce-na telefaonina marobe amin’ny anaran’olona samihafa. Nitohy ny fanadihadiana ka tratra ireo vehivavy telo mpiray tendro amin’izy ireo ny 9 janoary teo. Mpividy puce sy mpikarakara ny trano hofaina hametrahana ireo alaina an-keriny ireo vehivavy ireo. Tratra ihany koa ny lehilahy mpiasa amina hotely iray ao Andravoahangy. Mahandro ny sakafon’ireo teratany vahiny alaina an-keriny ny asany ka mikarama 50 000 Ar isan’andro izy amin’izany.
500 tapitrisa Ar ny takalonain’i Navaze Veldjee…
Nahatratra 500 tapitrisa Ar niampy vola vahiny ny takalonain’ity teratany karana ity. Teny Ankadindramamy ny toerana nangatahan’ireo jiolahy hanomezan’ny fianakaviana ny vola, enina andro taorian’ny naka an-keriny azy. Misy “Villa” be kosa eny Nanisana Soavimbahoaka hofain’izy ireo hametrahana ireo halaina an-keriny. Mitovy tamin’ny fomba nakan’izy ireo an’i Navaze Veldjee, ny taona 2018 ihany ny nakan’izy ireo azy ny volana desambra teo teny Soavimbahoaka.
Ekipan’i Djaffar sy Lama… ry Ragodogodona
Nohazavain’ny Kly Ravelomanana Tahina fa ekipa iray tarika tamin’i Djaffar (efa any Tsiafahy) sy Lama ry Ragodogodona sy ny namany. Mifankafantatra tsara izy ireo. Mbola eo am-pikarohana ny naman’izy ireo ny zandary. Anarana nalaza teo amin’ny raharaha fakana an-keriny, ny taona 1998 Randriamanana Norbert na Lama, namana akaiky an’i Mahandry (maty voatifitra teny Ankerana). Heno indray ny anaran’i Lama, ny taona 2005 ary saika nahitana ny dian-tanany sy nahenoana ny anarany hatrany ny fakana an-keriny rehetra taorian’izay. Efa nogiazana rahateo ireo trano “Villa” eny Ambohibao sy Andakana, novidin’izy ireo tamin’ireo vola takalonaina, miampy tany eny Mahitsy. Efa ho 20 taona mahery aty aoriana, mbola miariaria any ihany ry Lama.